मेरो देश मेरो संस्मरण,(शेखर ढुङ्गेल)
कुरा सामान्यजस्तै लाग्छ तर विगतको पेशागत दौरानमा बटुलेका विभिन्न अनुभवमध्ये निम्न दुई घटनाले पेशाप्रति नै वितृष्णा जागी सो पेशामात्र होइन त्यो प्रशासनिक संरचना र वातावरणदेखि वाक्क भई देशै छाड्ने विचार मनमा आयो । जहाँ इच्छा त्यहीं उपाय भनेझैं विश्वको विकसित अविकसित गरी १७ देश आफ्नै आर्थिक क्षमतामा भ्रमण गर्नसक्ने पनि बनायो ।
२०४४ साल पौषमा इलाका प्रमुखको रुपमा मेरो सरुवा रामेछापको इलाका प्रहरी कार्यालय चोप्राङ्गमा भयो । त्यसबेला सो ठाउँमा पुग्नको लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मुडेबाट सैलुङ्गडाँडा काट्दै जानुपर्ने थियो । अर्को बाटो काभ्रेको दोलालघाटबाट जान्थ्यो । दोलालघाट दोभानटारमा बासबसी भोलिपल्ट बिहानको १०-११ बजे मात्र चोप्राङ्ग पुगिन्थ्यो । यदि प्लेनबाट जाने हो भने काठमाडौंबाट १७ मिनेटको उडानमा मन्थली पुगी ८ घण्टाको पैदल यात्रापछि मात्र त्यो विकट ठाउँमा पुगिन्थ्यो ।
पञ्चायत कालको चरम दबदवा र प्रहरी ज्यादतीको नमुनाजस्तै थियो त्यो जिल्ला । प्रहरी पञ्च को कठपुतली र पञ्च र प्रहरी मिलेपछि संविधान नियम कानुन कुन चराको नाम हो गाउँका जनतालाई पत्तो थिएन । एउटा उदाहरण दिउँ म जानुभन्दा ६ महिनाअघि त्यस ठाउँमा लामा थरका एक व्यक्ति प्रमुख थिए । उनले स्थानीय हाट-बजारबाट एक युवतीलाई आफ्ना सहायक समेतको सहयोगमा जबरजस्ती अपहरण गरेर ल्याएछन् र रातभर सामूहिक बलात्कार गरेछन् । त्यो घटना तत्कालीन समयका धेरैजसो पत्रपत्रिकामा पनि छापिएको थियो । तर कुरो के रहेछ भने निज लामा तात्कालीन प्रहरी प्रमुख डिवी लामा का प्रिय पात्र रहेछन् । त्यसैले उनको एक तह घटुवाको कारबाही मात्र भयो । अनुमान गर्नुस् कस्तो रहेछ नेपालको कानुनी स्थिति । त्यो स्थानमा बसुन्जेल मैले आफूलाई कार्यालय प्रमुखभन्दा पनि अपराधीको संरक्षक प्रमुखको रुपमा पाएँ । सबै प्रहरी उस्तै हुँदैनन् भन्दा पनि विश्वास गर्नेको खडेरी नै परेको वातावरण मैले पाएँ ।
अर्को मार्मिक प्रसङ्ग त्यो कार्यालयअन्तर्गत जिल्लाको दोस्रो एसएलसी परीक्षा केन्द्र थियो पकरवासमा । त्यहाँ प्रत्येक बर्षको परीक्षामा प्रहरीको काम प्रत्येक 'चिट' पास गरेबापत पचास रुपियाँ लिने चलन रहेछ । त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन । परीक्षा सुरु भयो । मैले परीक्षा केन्द्रको चारैतिर सय मिटरको दुरीमा 'नो इन्ट्री' भनी प्रहरीलगायत कोही पनि प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थिएँ । त्यसैको कारण होला भोलिपल्ट आवा आयो । त्यस बेला संचारको एउटै साधन आवा मात्र थियो । जिल्ला प्रमुखबाट आदेश आयो- 'तपाईं सहायकलाई परीक्षाको जिम्मा दिई तुरुन्त जिल्ला कार्यालय फर्किनुहोला' । भएछ के भने विगतमा परीक्षा केन्द्रबाट त्यसरी उठाएको पैसा जिल्लामा पनि पठाउने चलन रहेछ । डिबी लामाले त्यसबेला धेरैजसो मधेशी मूलका प्रहरीलाई घुस्याहा भनी सजाय दिन पहाडतिर लखेट्ने गरेका थिए । उनीहरुको पनि कमाई खाने भाँडो परीक्षा केन्द्र नै थियो । अभिभावकले पनि आफ्ना छोरा नाति नातिना पास गराउन विगतको परम्पराको निरन्तरता चाहेका रहेछन् । उनीहरुले पनि मलाई त्यति रुचाएका थिएनन् । मेरो सोचाइ र पेशाको अवैध अमर्यादित व्यवहारको बीचमा अन्तर विरोध रह्यो ।
माघको अन्तिम हप्ता थियो । सिरेटो हावासंगसगै पारिलो घाम पनि थियो । म त्यै पारिलो घाममा टेवुल राखी काम गर्दै थिएँ । कार्यालयको आँगनमा एकसरो चोलो मात्र लगाएकी अन्दाजी दुई बर्षजतिको कट्टुमात्र लगाएको छोरो च्यापी त्यस्तै २२/२४ कि जस्ती देखिने महिला आइन् । मैले अनुमान लगाइसकेको थिएँ- पक्कै घर झगडा भएको हुनुपर्दछ । कठ्यांग्रने जाडोमा नाङ्गो बच्चा बोकेकी उनलाई देखेर उनको वाध्यता र गरिबीको अन्दाज लगाउन पनि मलाई गाह्रो भएन ।
सोधेँ 'के भयो बहिनी? "सर ! श्रीमान् घरमा हुनुहुन्न । सासूले खान नदिएको दुईदिन भयो । आज त घरबाटै निकालि दिइन् । माइतीमा बाबुआमा मरिसके । एउटा दाइ थियो शहर गएको त्यसको पनि केही खबर छैन । सर मेरो जाने ठाउँ कही छैन म के गरौं ?" उनले एकैसासमा बताइन् । उनी तीनघण्टा लामो पैदल यात्राबाट आएकी थिइन् ।
उनले समस्या बताउँदा बताउँदै प्रहरी पठाई उनको सासूलाई सम्झाउनु पर्ने निर्णय मैले गरिसकेको थिएँ । मैले उनको मौखिक बयानलाई लिखित निवेदनको रुप दिइसकेको थिएँ । उनको ल्याप्चे सही लिई तुरुन्त प्रहरीसाथ लगाई पठाउन सहायकलाई आदेश दिएँ ।
यतिकैमा ती महिला आफ्नो दुइ हातले कम्मरको पटुका खोतल्न थालेको देखेर म कौतुहलले हेर्दै थिएँ कि उनको त्यो हातमा खुचुमुच्च भएको सयको नोट सीधा बन्दै मतर्फ बढ्दै थियो । मेरा आँखा रसाएर आए । गला अबरुद्ध भएजस्तो भयो- उनको बढ्दो हात र त्यो नोटले । प्रहरी हुनु भनेको गर्बको विषय नभएरआश्रित हुनु हो जस्तो लाग्यो ।
'सर !' उनको बोलाहटले म झस्किएँ । म त्यो प्रहरी थिइनँ जो त्यो स्वीकार गरोस् । मैले उनको हात राख्दै भने 'बहिनी प्रहरीलाई काम गरेबापत पैसा दिनुपर्दैन । हामीलाई सरकारले तलब-भत्ता रासन दिएको छ । मेरो शब्दले उनलाई विश्वास लागेनछ । फेरि सोधिन् 'के प्रहरी जान्छन् त ? अगाडि तयारीमा रहेका प्रहरीलाई देखाउँदै भनें 'ऊ हेर्नुहोस् तयार भैसके ।' उनी ढुक्क हुनसकेकी थिइनन् किनकि त्यहाँ प्रहरीले बिनापैसा काम गरेको आजसम्म कसैले सुनेकै थिएनन् रे । नियम के रहेछ भने जस्तोसुकै समस्या भएपनि निवेदनका साथ सय रुपियाँ राख्नैपर्ने र प्रहरी खटाएवापत कुखुराको मासु खुवाउनै पर्ने ।
अशिक्षित गरिब र देशको विकट पहाडी गाउँमा प्रहरी कसरी राज गर्दो रहेछ सामान्य उदाहरण मात्रै थियो यो । नोकरी प्रवेशको छोटो समयमा नै भोगेको विकृतिपूर्ण ब्यवहारले मलाई त्यो सेवाप्रति वितृष्णा बढाउँदै लगेको थियो । एक हप्तापछि काठमाडौं आई सरुवा मागेको त फेरि नवलपरासी जिल्लाको रुद्रपुर इलाका प्रमुख बनाइदिए ।